Chọọ ma budata ọkwọ ụgbọala maka ASUS P5GC-MX / 1333 motherboard
Otu esi ebufe faịlụ sitere na kọmputa gaa na kọmputa
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-eche mkpa ọ dị ịbufe data sitere n'otu PC gaa na ọzọ. Kedu ụzọ dị mfe ma dị mfe? Anyị ga-atụle ọtụtụ nhọrọ na isiokwu a. Ịnyefe faịlụ site na kọmputa na kọmputa E nwere ọtụtụ ụzọ maka ịnyefe data site n'otu PC gaa na ọzọ.
Dezie njehie 0x8007025d mgbe ị na-etinye Windows 10
Ugbu a, Windows 10 sistemụ arụmọrụ bụ ụdị ọhụrụ kachasị na Microsoft. Ọtụtụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ya, na-aga site n'aka ndị okenye. Otú ọ dị, usoro ntinyeghachi adịghị aga n'ihu mgbe nile - ọtụtụ mgbe njehie dị iche iche na-eme na ya. Ọ na-abụkarị mgbe nsogbu bilitere, onye ọrụ ahụ ga-enweta ọkwa na nkọwa ya ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ koodu ahụ.
Error Kwụsị 0x000000A5 na Windows 7 na mgbe ị na-etinye Windows XP
Codehie koodu 0x000000A5 nke na-egosi na-acha anụnụ anụnụ nke ọnwụ na Windows 7 nwere ihe dị iche iche dị iche iche karịa ya mgbe ị na-etinye Windows XP. Na ntuziaka a, anyị ga-eleba anya iji kpochapụ njehie a abụọ. Nke mbụ, ka anyị kwuo banyere ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị hụ ihuenyo na-acha anụnụ anụnụ na ozi na codex 0X000000A5 mgbe ị na-arụ ọrụ na Windows 7, mgbe ịgbanyere kọmputa maọbụ mgbe ịpụsịrị na ọnọdụ ụra (ụra).
Ijikọ na kọmputa dịpụrụ adịpụ na Windows XP
Njikọ nke ime ka anyị nwee ike ịnweta kọmputa na ọnọdụ dị iche - ụlọ, ụlọ, ma ọ bụ ebe ọ bụla netwọk dị. Njikọ dị otú ahụ na-enye gị ohere ijikwa faịlụ, mmemme na ntọala nke OS. Ọzọ anyi ga ekwu banyere otu esi ejikwa uzo di nfe na komputa na Windows XP.
Taa, USB bụ otu n'ime usoro mgbagwoju data kachasị dị n'etiti kọmputa na ngwaọrụ ejikọrọ. Ya mere, ọ bụ ihe na-adịghị mma mgbe usoro ahụ adịghị ahụ ngwaọrụ ejikọrọ na njikọ kwekọrọ. Karịsịa ọtụtụ nsogbu na-ebili mgbe keyboard ma ọ bụ òké na-ejikọta na PC site na USB.
Na-agba ihe oyiyi ISO na kọmputa na Windows 7
Otu esi ejikwa òké si keyboard na Windows
Ọ bụrụ na òké gị akwụsị ọrụ, Windows 10, 8 na Windows 7 na-enye ike ịchịkwa pointer pointer site na keyboard, ma ụfọdụ ihe omume ndị ọzọ anaghị achọrọ maka nke a, ọrụ ndị dị mkpa dị na usoro ahụ n'onwe ya. Otú ọ dị, a ka nwere otu ihe achọrọ maka ịchịkwa nchịkwa site na iji keyboard: ịkwesịrị keyboard nke nwere nchịkọta ọnụọgụ dị iche na nri.
Sistema DLNA Windows 10
Nke a nkuzi kọwaara otu esi emepụta ihe nkesa DLNA na Windows 10 maka mgbasa ozi egwu na TV na ngwaọrụ ndị ọzọ site na iji ngwaọrụ ndị e wuru n'ime usoro ma ọ bụ iji mmemme ndị ọzọ. Nakwa otu esi eji ọrụ nke igwu ọdịnaya site na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ n'enweghị mwube.
Ịwụnye Windows 7 site na disk na kọmputa (laptọọpụ)?
Ndewo! Nke a bụ isiokwu mbụ na blog a ma m kpebiri itinye ya na ntinye sistemụ arụmọrụ (nke a na-akpọ ya os) Windows 7. Oge nke Windows XP a na-adịghị edozi na-abịa na njedebe (ọ bụ ezie na ihe dịka pasent 50 nke ndị ọrụ ka na-eji OS), nke pụtara na oge ọhụụ na-abịa - oge nke Windows 7.
Esi gbanwee ndabere nke "Desktọpụ" na Windows 7
Igwe ihuenyo ọkọlọtọ nke Windows na-emerụ ngwa ngwa. Ọ dị mma na ị nwere ike ịgbanwe ya na foto ịchọrọ. Nke a nwere ike ịbụ foto ma ọ bụ onyinyo nkeonwe gị na Ịntanetị, ịnwere ike ịmebe ihe nkiri slide ebe foto ga-agbanwe ọ bụla sekọnd ma ọ bụ minit. Naanị bulie foto ndị dị elu ka ha wee maa mma na nyocha.
Esi chọpụta nsụgharị nke DirectX na Windows
Na ntuziaka a maka ndị ịmalite, otu esi chọpụta nke DirectX arụnyere na kọmputa gị, ma ọ bụ karịa, ịchọpụta ụdị mbipute DirectX na-eji ugbu a na Windows gị. Isiokwu ahụ na-enyekwa nkọwa ndị ọzọ na-enweghị ihe doro anya gbasara nsụgharị DirectX na Windows 10, 8 na Windows 7, nke ga-enyere aka ịghọta ihe na-eme ma ọ bụrụ na egwuregwu ma ọ bụ mmemme anaghị amalite, nakwa dịka ọnọdụ ebe mbipute ahụ nke ị na-ahụ mgbe ị na-elele, dị iche na nke ị na-atụ anya ịhụ.
Windows ProgramData nchekwa
Na Windows 10, 8, na Windows 7, enwere folda ProgramData na sistemụ mbanye, na-edugharị C, ndị ọrụ nwere ajụjụ gbasara nchekwa a, dịka: ebee ka folda ProgramData, gịnị bụ nchekwa a (na gịnị kpatara ya na-apụta na mberede? ), gịnị ka ọ bụ na ọ ga-ekwe omume wepu ya. Ihe omuma a nwere azịza zuru ezu maka ajụjụ ọ bụla edepụtara na ozi ndị ọzọ gbasara folda ProgramData, nke m na-atụ anya na ọ ga-akọwa nzube ya na omume ndị dị na ya.
Ihe nzuzo nke Windows 10
E mepụtara Windows 10 sistemụ arụmọrụ na-emeghe ule. Onye ọrụ ọ bụla nwere ike inye onyinye maka mmepe ngwaahịa a. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na OS a enwetawo ọtụtụ atụmatụ dị mma na "ibe" ọhụrụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ mmezi nke mmemme a na-anwale oge, ndị ọzọ bụ ihe dị ọhụrụ.
Iji dozie nsogbu ahụ na bọtịnụ "Malite" na Windows 10
Ndị mmepe nke Windows 10 na-agbalị ime ngwa ngwa niile mmezighị emezi ma gbakwunye atụmatụ ọhụrụ. Mana ndị ọrụ ka nwere ike ịgbagha nsogbu na sistemụ arụmọrụ a. Dịka ọmụmaatụ, njehie na arụ ọrụ nke bọtịnụ "Malite". Dozie nsogbu nke bọtịnụ Malite na-adịghị arụ ọrụ na Windows 10 E nwere ọtụtụ ụzọ isi dozie njehie a.
Idozi nsogbu ahụ site na iji loading Windows 7 mgbe imelite
Oswanye mmelite OS na-enyere aka ịmepụta ihe dị iche iche, ndị ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ. Mgbe ụfọdụ mgbe ị wụnye mmelite na Windows, ọdịda na-eme, na-eduga ọ bụghị naanị na ozi ezighị ezi, kamakwa ụgwọ ọrụ zuru ezu. N'isiokwu a anyị ga-ekwu banyere otu esi eme ihe n'ọnọdụ ebe, mgbe nwelite ọzọ, usoro ahụ jụrụ ịmalite.
Onye ọrụ Windows ọ bụla nwere ike iwepu paswọọdụ site na kọmpụta ahụ, ma ọ ka bara uru ichebara ihe niile echiche. Ọ bụrụ na onye ọzọ enwere ike ịnweta PC, mgbe ahụ, ị ​​gaghị eme nke a, ma ọ bụghị na data gị ga-anọ n'ihe ize ndụ. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka ya, mgbe ahụ, a ga-agbagha ụdị nchedo dị otú a.
Otu n'ime nsogbu kasịnụ nke nwere ike ime na kọmpụta bụ nsogbu na mmalite ya. Ọ bụrụ na ọrịa malfunction pụtara na OS na-agba ọsọ, ndị ọrụ ogo ma ọ bụ ndị na-erughị ogo na-anwa idozi ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, mana ọ bụrụ na PC amaliteghị ma ọlị, ọtụtụ na-adaba na nzuzu na amaghị ihe ị ga-eme.
Troubleshoot na-efu mgbagwoju anya nhazi cursor na Windows 10
Nruzi bụ isi kọmputa na-achịkwa ngwaọrụ. N'ihe nkwụsịtụ, onye ọrụ ahụ nwere ike ịnweta ihe isi ike dị na iji PC. Na laptọọpụ, ị nwere ike ịnweta analogue ahụ n'ụdị akapad, ma gịnị ka ndị nwe kọmputa desktọọpụ kwesịrị ime n'ọnọdụ a? Nke a bụ ihe ị ga-amụta site na isiokwu a.
N'isiokwu a, m ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi ebudata asụsụ Russian maka Windows 7 na Windows 8 wee mee ya asụsụ na-adịghị. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike ịdị mkpa, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ibudatara ihe oyiyi ISO site na Windows 7 Ultimate ma ọ bụ Windows 8 Enterprise maka n'efu na ebe nrụọrụ weebụ Microsoft gọọmenti (otu esi eme nke a, ị nwere ike ịchọta ya ebe a), ebe ọ dị maka nbudata na English.
Wepụ onye nchịkwa na Windows 10
Ọ bụghị ndekọ mgbe niile na kọmputa na-agba ọsọ Windows ga-enwe ikikere nchịkwa. Na nduzi taa, anyị ga-akọwa otu esi ehichapụ akaụntụ onye nchịkwa na Windows 10. Otu esi gbanyụọ onye nchịkwa bụ otu n'ime ihe ọhụrụ nke "ọtụtụ".